Pachís 🎲 Gali, ku raaxee oo ka ciyaar Emulator.online
Parcheesi. Waxay jecel yihiin jiilasha dadka adduunka oo dhan, xaraashka waa ciyaar guddi ku farxa kuna raaxeysanaya fudeydkeeda. Aan aragno Taariikhda iyo xiisaha Parcheesi.
Parcheesi: sida loo ciyaaro talaabo talaabo 🙂
Waa maxay Parcheesi? 🎲
Ciyaarta Parcheesi waa ciyaar guddi ah oo aan u baahnayn hordhac. Bari ciyaar dhaqameed Had iyo jeer waa ikhtiyaar weyn oo carruurta iyo dadka waaweyn la isugu keeno guriga ama meel bannaan.
Foornooyinka dib uma laaban karaan, waxay kaliya ku hormari karaan jihada saacad-diidka ah, iyo inaad gasho guriga ugu dambeeya waa inaad rogtaa tirada saxda ah ee loo baahan yahay.
Haddii tirada soo baxaysaa ay ka badan tahay intii loo baahnaa oo ay weheliyayaashu u dhaqaaqaan irridda geeska ugu dambeeya, waa inaad mar labaad ku wareegtaa looxyada.
Ciyaartoyda waa kolba dhinac bay qabsadaan si aad u rogto laadhuuga.
Si aad uga saarto kaarka gurigiisa ama sanduuqa bilowgiisa, ka qaybgalaha waa inuu helaa nambarka 5 (meelaha qaarkood lambarka 6). Intaas ka dib, waa inaad ku sii jirtaa fagaarahaas oo aad sii marisaa wakhtigaaga.
6-da waa Grail Holy of Parcheesi, sida ay tahay waxay u oggolaanaysaa gabal inuu hore u mariyo 6 laba jibbaaran oo laadhuuhu mar kale rogrogo.
Hadaad laadhuubto saddex 6 oo isku xigta, pawn ugu dambeeya ee la dhaqaaqo wuxuu noqon doonaa lagu ciqaabay iyadoo lagu soo laabtay fagaaraha bilowga, meesha ay kuhayaan cowska bilowga ciyaarta.
Gudaha Parcheesi, wax ka badan 2 gogo 'looma oggola inay ku fadhiistaan ​​isla halbeega looxa.
Haddii ay dhacdo in laba qaybood ay isku meel ku yaalliin, waxaa la dhisayaa "munaarad" ama "caqabad" xannibaya marinka midabada kale.
Caqabada waxaa saari kara oo keliya abuuraheeda. Haddii ciyaartoygan uu is-rogo 6 geerida, waxaa lagu qasbi doonaa inuu kala furfuro qaab-dhismeedkiisa, isagoo u raraya mid ka mid ah baaburta dusha sare ee munaaradda.
Haddii qof is rogo laadhuu oo uu ku dhammaado inuu ku soo dego isla meeshii uu saaxiibku joogo, saaxiibkan nasiib-darrada ahi waa inuu dib ugu noqdaa bilowgii. Dhaqdhaqaaqa waxaa loo yaqaan "cun ka soo horjeedka".
Taariikhda Parcheesi 🤓
Taariikhda ayaa leh ciyaarta oo ka dhalan lahayd Parcheesi wuxuu ku dhashay Hindiya waqti hore, bartamihii qarnigii XNUMXaad.
Loogu yeedhay Pachisi , waxaa horay loogu ciyaari jiray kuwa caanka ah Godadkii Ajanta , oo ku yaal gobolka Maharashtra.
Matalaaddeeda ugu horreysa waxay ka muuqataa dabaqa iyo derbiyada godadka, kuwaas oo ah loox ahaan loo isticmaalay
Ujeeddadu waxay tahay in si hufan ay ugu wacan tahay hodantinimada farshaxankeeda iyo rinjiyeynta godadka laga soo bilaabo Qarnigii XNUMXaad BCMaanta, dhismahan dhismaha wuxuu ka kooban yahay soddon iyo laba godod waa goob UNESCO u ah Dhaxalka Adduunka. Waa in loo arkaa goob dalxiis qofkasta oo booqanaya Hindiya.
Xiisad kale, oo lagu calaamadeeyay sheekooyinkii hore, waxay ahayd dariiqa "is dhexgal" ka yar boqorka Hindiya Jalaluddin Muhammad Akbar ikhtiraacay inuu ciyaaro Pachisi. Asal ahaan abuuray qaab ciyaarta oo toos ah, isagoo ku beddelaya xubnihii sabuuradda ku jiray dumar ka yimid gurigiisa.
Parcheesi iyo magaceeda kala duwan
Maaddaama wax kasta oo wanaagsan ay ku dhammaanayaan in la soo guuriyo, dhammaadkii qarnigii XNUMXaad, oo uu la jiray gumeysigii Ingiriiska, Pachisi wuxuu qaaday talaabadiisii ​​ugu horeysay dibada.
Muddo yar ka hor ayey ahayd markii gumeystayaashii Boqortooyadii Ingiriiska ay ciyaarta u soo bandhigeen Boqortooyada Midowday, halkaas oo, la qabsashada qaar ka dib, si rasmi ah loogu magacaabay Ludo (Laatiinka "ciyaarta") sidaas darteedna loo sharciyeeyay 1896.
Waxa la ogyahay wixii markaa ka dambeeya waa in ciyaarta "ay baxday" iyo, inta safarka lagu jiray, Ludo iyo noocyadeeda kala duwan waxay caan ka noqdeen dalal badan oo adduunka ah, iyagoo wata magacyo kala duwan.
Jarmalka dhexdiisa, tusaale ahaan, Ludo waxaa loogu yeeraa “Mensch ärgere dich nicht", Oo macnaheedu yahay wax la mid ah"Saaxiib ha waalin”, Oo leh magacyo u dhigma oo kala ah Dutch, Serbo-Croatian, Bulgarian, Czech, Slovak iyo Polish, halkaas oo si fiican loogu yaqaan Shiinaha ("The Chine (yada) e").
Iswidhan gudaheeda, waxay caan ku tahay “fia", Magac ka soo jeeda ereyga Latin ee fiat, oo macnaheedu yahay"saas noqo".
Kala duwanaanshaha guud ee magaca ayaa ah "Fia-spel"(Fia ciyaarta) iyo"Fia med knuff”(Fia leh riix). Danmark iyo Noorway, si layaab leh ayaa magaca Ludo loogu hayey.
Waqooyiga Ameerika, waxaa loogu yeeraa, sida Spain oo kale, Parcheesi. Laakiin sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho ay abuureen noocyo kala duwan, oo loo yaqaan Waan ka xumahay! iyo Dhibaato.
Spain gudaheeda, dhamaanteen waxaan u naqaanaa Parcheesi.
Waxyaabaha xiisaha leh ee Parcheesi 🎲
Thanks to xeerar fudud oo fudud oo si fudud loo xasuusto, ciyaarta Parcheesi ayaa ku habboon da 'walba, in caruurtu ay kuwada ciyaari karaan midba midka kale ama qoyska intiisa kale. Tan ugu caansan ayaa ah in 2 ilaa 4 ciyaartoy ay ciyaaraan, laakiin waxaan sidoo kale helnaa noocyo ciyaara laba ama kabadan ciyaartoy. Xaaladdan oo kale, midabada waxaa lagu daraa casaan dhaqameed hore, buluug, jaalle iyo cagaar ah.
Ciyaar tartan ah
Kuwa u suurtagashay inay u gudbaan si aan dan ka lahayn yaabkan oo aan si fiican u aqoon waxa ku saabsan, the Parcheesi waa ciyaar loox oo ay ciyaari karaan 2, 3 ama 4 ciyaartoy (kiiskan sameysan karaan labo-labo).
Guddiga Parcheesi waa laba jibbaaran oo ay ku calaamadeysan tahay iskutallaab, iyadoo gacan kasta oo ka mid ah iskutallaabtu ay tahay midab ka duwan (badanaa casaan, jaalle, cagaar iyo buluug).
Ciyaaryahan kasta waa inuu sameeyaa 4-ta qaybood, loona yaqaan "guntinThefardo”, Dhameystir wareegsan sabuuradda oo aad gaarto fagaaraha ugu dambeeya kuwa kale.
Sida Ciyaar laadhuu! Taasi waa sax, Parcheesi waa ciyaar nasiib, laakiin ma xiiso yara.
Laba ciyaarood oo caan ah
Xaqiiqdii waad horay u aragtay in rogista looxyada ciyaartan ay sidoo kale ka mid yihiin Ciyaarta Goose. Sidoo kale ka laba gees leh, laakiin naqshad yar oo ka duwan ayaa ah Ciyaarteena Parchis y Gloria. Waxyooday sheekooyin taariikhi ah sida “Qudhaanjada iyo Cows-kaTheDawacada iyo Codka”Waxay u oggolaanaysaa carruurta ka weyn 3 sano inay ku baashaalaan laba ciyaarood. Gabalkiisu wuxuu u eg yahay faras.